Farmaajo oo muddo koororsi maanta isku dayay | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo muddo koororsi maanta isku dayay
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in Farmaajo saaka isu dayay inuu si xoog ah ku sameysto muddo kordhin sharci darro ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in maanta Madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo uu isku dayay in muddo kordhin sharci darro ah ay u sameeyaan Golaha Shacabka.
Ajandaha kulankii Baarlamaanka waxaa qeyb ka ahaa dhageysiga wax qabadka 100-ka maalmood ee xukuumadda, waxaana qodobkaas laga saaray mar danbe oo ay xildhibaanada mucaaradka ah codsadeen.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Farmaajo ku eedeeyay in uu waligiis aaminsanaa in awood iyo ciidan laga hor mariyo sharciga iyo dastuurka isla markaana uu saaka Aqalka Baarlamaanka soo galiyay 100 askari oo dhar cad ah si xoog loogu marsiiyo qorshe xukuumaddu waday oo ahaa muddo kororsi.
“Dhamaan afrtiisi sano Farmaajo wuxuu ku dhameystay gacan ka hadal, mar kasta awood iyo ciidan ayuu ka hor marinayay sharciga iyo dastuurka, saaka oo ugu danbeysay Baarlamaankuu ayuu soo galiyay 100 askari oo dhar cad ah si xoog loogu marsiiyo qorshe xukuumaddu waday oo ahaa muddo kororsi”. Ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
RW Rooble ayaa lagu wadaa inuu Arbacada hor tago fadhiga baarlamanka Soomaaliya si uu halkaas uga soo jeediyo wax-qabadka 100 maalin ee uu xafiiska fadhiyay.